चीन तेल फलि machine मेशीन लाइन कारखाना र आपूर्तिकर्ता Higee
यो भरिने मेसिन लाइन उच्च चिपचिलो तरल पदार्थ वा तेल, जाम आदि जस्ता सामग्री भर्नको लागि हो। यो रैखिक फिलिंग लाइन हो, जुन एक भोजन लाइन, भरिने मेसिन, क्यापिंग मेशिन, मिति प्रिन्टर, लेबलिंग मेशिन एक पूर्ण लाइनको रूपमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
भुक्तानी सर्तहरू: TT, L / C
तेल भर्ने क्यापिंग मशीन लाइनियर लाइन
१. स्वचालित तेल भर्ने मेसिन
तेल, क्रीम, जाम, डिटर्जेंट, र अन्य पेय पदार्थ, खाद्यान्न, रसायनिक, कीटनाशक, चिकित्सा, वस्तु, र अन्य धेरै उद्योगहरूमा अन्य उच्च चिपचिपा सामग्री।
Urate सटीक भोल्यूम: सर्वो प्रणाली लागू गरिएको छ भरिने भोल्युमको उच्च शुद्धता सुनिश्चित गर्न।
● परिवर्तनशील गति: भरिने गति आवाश्यक मात्रामा पुग्दा स्वचालित रूपमा ढिलो हुनेछ।
Merge डूबिएको भरिने: फोमिंग र स्पिलिंगबाट बच्न भरिने नोजलहरू तरलमा डुब्नेछ।
● बौद्धिक समायोजन: तपाईले टच स्क्रिनमा प्यारामिटरहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ विभिन्न भरिने भोल्युम वा राम्रो ट्यूनिंगको लागि। सबै भरिने हेड समायोजित गर्न सकिन्छ। योसँग प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेस छ र अपरेट गर्न सजिलो छ।
● प्रदूषण रहित: मेशिनको मुख्य फ्रेम राम्रो-विरोधी संक्षारक प्रभावको साथ उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील 4०4 बाट बनेको छ। सबै सम्पर्क भागहरू स्टेनलेस स्टील 316L बाट बनेको हो। सम्पूर्ण मेसिनलाई स्टेनलेस स्टील र कठोर गिलासले बन्द गरिएको छ ताकि बेकारको ग्यास चुहावट रोक्न सकिन्छ।
२.अटोमेटिक घुमाउने क्यापिंग मेशिन
यस प्रकारको क्यापिंग मेशिन एक स्क्रू क्यापको साथ गोल, वर्ग वा फ्ल्याट बोतलहरूको क्यापिंगका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
A.अटोमेटिक स्टीकर लेबलिंग मेशीन
यस प्रकारको लेबलिंग मेशिन व्यापक रूपमा चिपकने स्टिकरहरूको साथ गोल बोतलहरूको लेबलिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो PLC द्वारा नियन्त्रण र सर्वो द्वारा संचालित छ। प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को संचालन गर्न को लागी एकदम सजिलो बनाउँछ।
१. स्वतन्त्र इलेक्ट्रोमेकानिकल लेबल रोलिंग संरचनाले रोलिंग र लेबलिंग प्रक्रिया सि sy्क्रोनाइज गर्दछ, जसले गर्दा लेबलिंग सटीकता सुधार हुन्छ।
२. त्यहाँ मेशिनमा एक निर्देशन छ कसरी लेबल फिल्म कन्फोल्भ भएको देखाउँदछ ताकि फिल्म परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ।
अघिल्लो: पास्चराइजर र स्टेरिलाइजर
अर्को: अत्यावश्यक तेल भरने मेसिन लाइन